Islaan ku geeriyootey boqol iyo sagaal sano jir - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ellen Vestling oo geeriyootey iyadoo 110 sano jir toddobaad uga dhiman yahay. Sawirle: TT
Islaan ku geeriyootey boqol iyo sagaal sano jir
La daabacay tisdag 11 februari 2014 kl 09.29
Ellen Vestling oo ku nooleyd tuulada Enviken oo ka tirsan degmada Falu ee gobolka Dalarna ayaa ku geeriyootey 109 sano jir, sida ay soo weriyeen laamaha saxaafadda ee gobolku. Waxayna noqotey qofkii ugu weynaa Iswiidhen oo caan noqota. Sidaasna waxaa qoray wakaaladda wararka ee TT.
Islaantaan oo nolosheeda dhan ku nooleyd tuulada Övertänger ayaa maalinta jimcaha oo bishaan febraayo tahay 14ka buuxsan lahayd boqol iyo toban sano. Waxay ahayd laba toddobaad ka hor markii uu wargeyska Dalarnas Tidningar ka wareystey waxa ay u qorsheysey xuska maalinta dhalashadeeda.
Qofkii ugu da’ weynaa oo iswiidhish ah oo ilaa hadda la og yahay ayaa jirsadey 113 sannadkii 2008, kolkaas oo uu geeriyoodey. Qofka hadda ugu da’ weyn Iswiidhen sida la og yahay ayaa ah qof dumar oo da’deedu tahay 109, dhalateyna bishii Mey ee sannadkii 1904.